Editorial : Oromo Democratic Front
wajjiin qabsoo ittiin qindeeffatu anjeessuu akka ta’e addeesse. Itti dabaluunis Addi Dimokiratawaa Oromoo mul’ata isaa kana fiixaan baasuuf qaama kamuu kan rakkoo biyya sanii furee biyya sana biyya saboota hundaa akka taatu barbaadu wajjiin hojjechuufis ta’e waliigaltee uumuuf qopha’aa tahuu ibse. Read More
Hidhaa fi ajjeechaan biyya Saudii-Arabiyyaa
Posted by ODF on November 22, 2013 · Leave a Comment
Cafaqaan, hidhaa fi ajjeechaan biyya Saudii-Arabiyyaa keessatti baqatoota Oromoo fi lammiiwwan Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru haal duree tokko malee daddaffiin dhabbatuu qaba!
Dhiheenya kana hawaasa Oromoo fi Ethiopia, akkasumas hawaasa saboota Afirka fi biyyoota sadaffaa sababa adda addaan biyyaa isaanii irraa ba’anii biyyoota arbaa adda addaa keessa jirtan irra miidhaan sukaneessaan yeroo gara yerootti ga’aa jiru heedduu yaaddessaa ta’ee jira.
Keessumaa mootummaan Saudi bifa baqaanis haa ta’u hojii barbaadannaa ykn sababa adda addaan dhaqanii biyya sana keessatti argamn irratti tarkaanfii gara jibinaa inni fudhachaa jiru seera mataa isaa baafatee qabuu kan mirga dhala namaa kabajuufi seera adunyaa mallatteessee jiruunillee kan faallaa ta’e ta’eetu argama.
Akka seerrii addunyaa ibsutti baqataa biyya itti dhalate keessatti roorrifamee, jiraachuu dadhabee daangaa biyya biroo qaxxaamuree kooluu galtummaa gaafatu sirnaa fi seeraan keessummeessuu fi simachuuf biyyootaa fi mootummoonni dirqama qaban. Haala kana ilaalchisee biyyootaa fi mootummoonni waadaa fi kakuu seenan (conventions) mallatteessan qabu. Read More
Posted by ODF on November 3, 2013 · Leave a Comment
Saba tokko akka sabaatti jiraachisuu fi guddisuun karaa filmaata biraa hinqabne tawuu isaa qabsaa’otaa fi jaarmayoonni Oromoo sirnaan hubachuu qaban jennee amanna. Sabootaa fi ummatoonni guddina olaanaa irra gayan karaa kana hordofanii jiraachuu fi guddachuu isaanii Oromoon hubachuu qaba. Hubachuu qofa utuu hin tahin fakkeenya hin haalamnee dhuga qabeessa tahuu fudhannee of dura tarkaanfachuu qabnaa jenna. Read More
Hariiroon sirna abbaa-lafummaa kessa jiru hariiro gubbaa-gadii (hierarchical) ta’ee, kan inni itti rarra’u walitti dhufeenya qabiyyee lafaa irratti ta’a. Jireenyaa fi yaada nama tokkoo, jechuun eenyummaa siyaasaa-fi-hawaasummaa isaa, yokiin gulantummaa (status) isaa sirna kana kessatti kan murteessu nami tokko sirna qabiyyee lafaa kessatti bakka inni qabatee jiru. Bittaa mootii yeroo jennummoo nama yeeroo baayyee maati tokko keessaa bahee dabareedhaan motummaa dhaalee namoonni biyya sana keessa jiraatan hundi jala-bultuu isaa (subject) yeroo ta’an jeechuudha. Namni tokko akka fakaattii biyyaatti fudhatamee sabni marti isa jala bula. Nama hundumaa’rraa sirna kana kessatti kan eegamu, ajajamaafi bultummaa (loyalty) isaa mootii kana argisisu taha. Eenyummaan siyaasaa-fi-hawaasummaa jirus kanuma irratti hirkata. Sirna Abbaa-irrummaa namtokke yeroo jennu, warra duriis hatauu yeroo jabana si’anaa keesa motummaa qabatanii namoota biyya saani haccuuccaadhan bulchan hunda ilaala. Eenyummaan siyaasaa-fi-hawaasummaa sirna akkasi keesa jirus, waanuma namicha isa bulchaa jiru faarsuufi gammachiisuudhaafi waan abbaan-irree ajajee hojiirraa olchu’irratti hundaa’e tahee mullata. Read More
Itophiyaa kaleessaa jalatti Oromoos ta’anii amba Itophiyaas ta’uun hin danda’amu ture. Jechuun, Itophiyummaa gonfachuun kan danda’amu yoo Oromummaa mulqachuudhaaf qophii ta’an qofa ture. Namni afaan Amaaraa hin dubbanne, akka amba Itophiyaatti hin ilaalamu ture. Kan aadaa Amaaraa hin maxxanfanne fi kan seenaa Amaaraa hin leellifnes, akka amba Itophiyaatti hin fudhatamu ture. Ambummaa akkasii gonfachuun kan danda’amu, kana gochuu qofaan miti. Waan eenyummaa Oromoo mul’isan hundaas lagachuun fi tuffachuun dirqii ture. Read More
Maqaan sirnaa kan biyyi Itophiyaa jedhamtee addunyaa biratti beekamtu kan duraanii Empayera Itophiyaa ture. Kana jechuun warri biyyicha uumee bulchaa tureyyuu, biyyi isaanii empayera ta’uu ni amanu turan. Empayera qabaachuun biyyooti Awropaa wajjin walqixa waan isaan taasisuuf ittiinis boonu turan. Dhuma Lola Addunyaa Lammaffaa (1945) booda garuu empayerri balfamaa dhufe. Haalli kun dhalachuun warri Awropaayyuu walabummaa biyyoota duraan koloneeffataa turanii akka fudhatan dirqe. Keessattuu Afrikaa keessatti walabumma gonfachuu kolonii warra Awropa baroota 1960ta keessatti daddaffiidhaan dhugoomaa ture. Kun deeme Empayera Itophiyaas yaaddessuu jalqabe. Ollaa empayerichaa keessaa kan dura walabummaa gonfate Sudan ture. Kunis bara 1956tti dhugoome. Itti aansee, Somalian bara 1960tti walaba baate. Akkuma duraan himame, Somalian empayerummaa Itophiyaa balaaleffatte mirga ummata afaan Somali dubbatuutiif falamuu jalqabde. Yeroodhuma kanatti warri Erteraas empayera ta’uu Itophiyaa balaaleffachuudhaan qabsoo walabummaa finiinsan. Qabsoon saboota koloneeffatamanii kanneen biraas yero sanatti ho’aa ture. Keessattuu kan Oromo baadiyyaa fi magaalaatti bifa haaraa horachaa dhufe. Baadiyyaa Lolli Baalee baroota danuudhaaf deemaa ture. Yeroodhuma sanatti magaalaa keessatti ammoo Waldayaan Maccaa fi Tuulamaa ijaaramee qalbii Oromootaa harkisaa ture. Read More
Constitution (Heeraa) fi Higga Mangist warri Ethiopia bulchan turanii fi jiran jedhan garaagarummaa isaa Addi Dimokiraatawaa Oromoo ADOn carraa kanaan gad fageenyaan hordoftoota isaaf ibsauu fedha. Read More
Xinaxala Haala Siyaasa Adunyaa – Barruu barnoota hubannaaf dhihaate
Barruu gabaabaan kun haala addunyaa kan yeroo ammaa irratti hubannaa fi yaada walfakkaatu uummatnis ta’e qabsaa’otni oromoo akka qabaatan gargaara yaada jedhu irraa akka ta’e dursinee isin hubachiisuu feena. kunis hubannaa walfakkaatu qabaachuun ilaalcha walfakkaatu akka qabaannuuf murteessaa dha. Ilaalcha walfakkaatuu qabachuun ammoo nu ijaara. Qaama tokkicha, qalbii tokkicha, sammuu tokkicha akka qabaannu nu taasisa. Akeekni barruu kanaa haala akkasii aanjessuu irratti xiyyeeffata.
Haalli kamiyyuu yeroo irraa gara yerootti ni jijjiirama. Waan ta’eef, xiinxalli haala addunyaas yeroo irraa gara yerootti haarayoomuu qaba. Xiinxallis sadarkaa adda addaatti godhama. Gariin irra keessa qofa tuttuqa. Gariin ammoo gadi fageessee ilaala. Gariin dheedhii dha. Gariin ammoo irra bilchaataa dha. Waan ta’eef, xiinxala dheedhii bilcheeffacha adeemuun dirqii dha. Akeekni barruu kanaas xiinxala sadarkaa duraa dhiheessuu dha. Yeroo irraa gara yerootti itti deebinee bal’isaa, bilcheessaa fi gadi fagoo taasisaa deemna. Read More
Godinaan Gaanfa Afrikaa jedhamee beekamu Sudan, Sudan Kibbaa, Eritrea, Djibouti, Somaliland, Somalia hafee fi Itophiyaa hammata. Boodana keessa Kenya fi Ugandas itti dabaluun ni jira. Garuu xiinxala keenya kanaaf jara boodanaa lamaan dabaluun faayidaa waan hin qabneef Gaanfa Afrika akka duraan beekamutti fudhanna. Godinaan kun Gaanfa warseessaa waan fakkaatuuf Gaanfa Afrikaa jedhamee mogGaanfame. Godinaa kana haallan walitti hidhan danduu dha. Keessattuu haalli politikaa biyyoota kanneen keessaa tokko keessatti dhalatu warra hafanis ni tuttuqa. Caalaatti ammoo wanti biyyoota ollaa isee keessatti dhalatu Itophiyaa ni tuttuqa. Sababni isaas ifaa dha. Itophiyaan walakkeessa Gaanfa Afrikaatti waan argamtuuf biyyoota hafan hundaa ni daangessiti. Dabalees sabootni naannoo daangaa iseetti argamanis biyyoota ollaa keessas ni jiraatu. Affaarotni Eritrea fi Djibouti keessatti ni argamu. Ummatni afaan Tigrinyaa dubbatu Eritrea keessas jira. Warri afaan Somaali dubbatus Djibouti, Somaliland, fi Somalia hafe keessatti ni argamu. Anyuwak fi Nuer akkasumas Sudan Kibbaa keessatti ni argamu. Waan ta’eef, haalli Itophiyaa keessatti dhalatu biyyoota ollaattis cehuun ni mala. Akkasumas haalli biyyoota ollaa isee keessatti dhalatus Itophiyaa tuttuquu danda’a. Read More